बिदेशी प्रेमिकासंग मस्ती गर्दागर्दै एक नेपालीको मलेसियामा ज्यान गयो साथमा भेटियो दुई बोत्तल ! - KlipMandu
उमेरले आफुभन्दा करिब १५ बर्षले कान्छी २४ बषिर्य भियतनामी प्रेमीका लिएर त्यहाँको बजेट होटलमा पुगेका हरिबहादुर मगरको सम्भोग सकेपछि राती करिब ११ बजे मृत्यु भएको हो । घटना करिब ३ साताअघिको भएपनि नेपाली समूदायबीच यो खबर एकसाताअघि मात्रै जानकारीमा आएको थियो । स्थानीय दैनिक पत्रिका हरियान मेट्रोमा अंकमा प्रकासित समाचारअनुसार यौनउत्तेजक औषधी सेवनपछि अत्याधिक ‘सेक्स’का कारण उनको मृत्यु भएको हो ।
दिँउसो करिब साढे तीन बजे हरिको जोडी चरम आनन्द लिन होटल प्रवेश गरेको थियो । राती ११ बजे उनकी प्रेमिकाले होटलमा खवर गरेकी थिइन् । स्खलित भएपछि सुतेको होला भन्ने सोंचेर चुप लागेकी प्रेमिका त्यतिबेला छाँगाबाट खसेजस्तै भइन जतिबेला प्रेमीको सास उडेको थाहा पाइन् ।
यौन उत्तेजक औषधीका कारण लखतरन परेकी प्रेमिका सकी-नसकी होटल व्यवस्थापनकहाँ खबर गर्न पुगेको प्रहरीसँगको सोधपुछका क्रममा बताइन् । जाँचबुझका क्रममा अत्याधिक उत्तेजक औषधी सेवनपछि यौनसम्पर्कका कारण हरिकी प्रेमीका चल्नै नसक्ने अवस्थामा थिइन् । यौनक्रिडाका कारण आफ्नो शरिर दुखेकाले बेलैमा होटल व्यवस्थापनमा खबर गर्न नसकेको आफुले पिल्स चक्की पनि खाएको बताएकी थिइन् घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार सो कोठामा प्रयोग गरिसकेका दुई बोत्तल यौन उत्तेजक औषधी र एक क्यान बियरको बोत्तल थियो ।
लत्ताकपडाहरु छरिएका अवस्थामा थिए । घटनापछि मृतक हरिको शवलाई पोष्टमार्टमका लागि अस्पतालमा राखिएको र प्रेमीकालाई भने अनुसन्धानका क्रममा नियन्त्रणमा लिइएको उल्लेख गरिएको छ । तर यसबारे पछिल्लो जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन । मृतक हरिको नेपालस्थित ठेगानापनि खुल्न सकेको छैन । यहाँस्थित नेपाली दुतावासमा पनि कुनै जानकारी नआएको स्रोतले बतायो।
← प्रधानमन्त्रीले हप्काएका राउटेहरुलाई उपराष्ट्रपति पुत्रले गरे सहयोग, हौसिदैं भने पुनको जय होस्
आण्टी-आण्टी भन्दै ढोका ढक्ढकायो, मैले ‘को हो ?’ भनेर सोध्दा ‘म प्रसादे हुँ ढोका खोल’ भन्यो →
नमस्कार अनि न्यानो अभिवादन, म दिपेश श्रेष्ठ वैद्य यसपल्ट काठमाडौँ क्षेत्र नं. ४